Bulchiinsi Magaalaa Naqamtee Waljeeqaa Jiraachuu Qeerroon Gabaase. | QEERROO
Bulchiinsi Magaalaa Naqamtee Waljeeqaa Jiraachuu Qeerroon Gabaase.
Onkoloolessa 29,2015 Naqamte
Bulchiinsi magaalichaa Obbo Tolasaa Waggaariitiin kan hoogganamu yeroo ta’u imaammata wayyaanee akka hafarsaniif karoora guddinaaf ce’umsaatti guddatanii ce’aniiru jechuun guddina siyaasaa laateefi kan uummata saamsisaa turetti waajirri daldalaafi faayinaansii beekkamtii isaan dhorkate . Waajjiracharraa Aadde Mihiratii kan jedhaman guutummatti kan ta’ee fi hin taaneensaa hin beekamneen manneen dhibba sadii (300) ta’an eyyama hin qabdan maqaa jedhuun kan cufsiiste ta’uu gabaasi Qeerroo ammaan duraa addeessa.
Haala kanaan gartuun waajjira IMX fi Obbo Zalaalam Gizaaw ittaanaa kantiibaa magaalaa Naqamtee manneen cumfaman kun ta’e jedhamee uummata Oromoo miidhuuf kan wixiname malee seera qabaeessa miti sababaa jedhuun mormii jabaa waan dhiheessaniif garuun mirga Oromoof malmuu fi kanneen shira uummata irratti hojjetan bulchiisa Wayyaanee magaalaa Naqamtee keessatti walitti bu’iinsaan mormii guddaatti walitti kaasanii jiraachuun beekame.
Wal dhabdeefi wal nyaachuun waajjiraalee kanaa utuu itti fufee jiruu maqaa guddina magaalotaa fi rakkoo nageentasaaniii jedhuun kaaabinooti onootaa,kantiiboti magaalotaa fi dabballooti godina wallagga bahaa magaalaa Naqamteetti akka itti dargaggoota kiyyeessanii fi wayyaanee jalatti barcuma eegan irratti marii’achaa akka jiran beekameera